Nginx 1.18.0 iri pano uye ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo | Linux Vakapindwa muropa
Nginx 1.18.0 iri pano uye ndidzo shanduko dzayo dzinonyanya kukosha
Mushure megore rekuvandudza, yakaunzwa bazi idzva rakatsiga reiyo yakakurumbira-inoshanda HTTP server uye yeprotrotocol proxy server "Nginx 1.18.0", iyo yaisanganisira iyo yakaunganidzwa shanduko pasi pebazi hombe 1.17.x.
Kune avo vasingazive nezve Nginx vanofanira kuziva kuti izvi ndizvo yepamusoro yekuita isina kuremerwa reverse proxy / webhu server uye proxy yeemail protocols (IMAP / POP3). Nginx yemahara uye yakavhurwa sosi software, ine rezinesi pasi peiyo Yakareruka BSD License, pamusoro pekuve muchinjikwa-chikuva, saka inogona kushandiswa pane Unix, GNU / Linux, BSD, Solaris, Mac OS X uye Windows masisitimu.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kune maviri maBhaibheri eNginx, OSS Nginx uye Nginx Plus (iyo yekutengesa vhezheni). Nginx Plus inopa mamwe mabasa asina kuiswa muOSS Nginx.
Chii chitsva muNinx 1.18.0?
Mune iyi vhezheni itsva yeNginx 1.18.0, akasiyana mirawo yakawedzerwa iyo inowedzera zvimwe zvinoshanda kuseva, ndizvo zvazvakaita murawo mutsva muganho_req_dry_run, iyo inogonesa bvunzo yekumhanyisa maitiro, iyo isingamanikidze zvirambidzo pakusimba kwekugadzirisa zvikumbiro (isina muganho wekumhanyisa), asi ichienderera ichiongorora huwandu hwekunze-kwe-bound zvikumbiro mune yakagovaniswa ndangariro.
Zvimwe yemirairo yakawedzerwa iri muganho_conn_dry_runque isa module ngx_http_limit_conn_module mune bvunzo yekumhanyisa maitiro, umo huwandu hwekubatana husingagumi, asi hunotarisirwa.
Kune rumwe rutivi tinogonawo kuwana anuth_delay, ndiwe inobvumira kuwedzera kunonoka kune zvisina mvumo zvikumbiro nekodhi yekupindura ye401 kudzikisira kusimba kwesarudzo yepassword uye kudzivirira kubva pakurwiswa kunoshandisa mashandiro ekurwiswa kwenguva kana uchinge wawana masystem-akadzivirirwa masystem, mhedzisiro yesququery kana JWT (JSON Web Token).
Wakawedzera rutsigiro rwezvakasiyana mumirairo «Limit_rate "uye" limit_rate_after«, Zvakare uye mumirairo "Proxy_upload_rate" uye "proxy_download_rate" yemutengo wekuyerera.
Directive grpc_pass yakawedzera rutsigiro rwekushandisa musiyano mune paramende inotsanangura kero. Kana iyo kero yakatsanangurwa sezita rezita, zita racho rinotsvaga pakati pemapoka eserver akatsanangurwa uye, kana asina kuwanikwa, zvinotemerwa kushandisa resolutioner;
Wakawedzerwa misiyano mitsva proxy_protocol_server_addr uye proxy_protocol_server_portque iwo ane kero ye server uye chiteshi chakawanikwa kubva kuPROYY protocol musoro.
Nezve dzimwe shanduko dzinotaurwa mukuziviswa kweshanduro iyi nyowani:
Variable muganho_conn_status yakawedzerwa module ngx_stream_limit_conn_module, iyo inochengeta mhedzisiro yenhamba yekubatanidza muganho: KUPASWA, KURAMBIDZWA, uye KUSVIRWA_DRY_RUN.
Musiyano $ muganho_req_status yakawedzerwa module ngx_http_limit_req_module , iyo inochengeta mhedzisiro yekudzikisira iwo mwero wekutambira kwezvikumbiro: KUPASWA, KUNONOKESWA, KURAMBIDZWA, KUNONESWA_DRY_RUN, uye YARAMWA_DRY_RUN.
Nekutadza, iyo module module inopihwa ngx_http_postpone_filter_module.
Wakawedzera rutsigiro rwekuchinja mazita enzvimbo mabhuroko uchishandisa $ r-> nzira zvemukati_redirect () yakapihwa yakavakirwa-mukati muturikiri wePerl. Iyi nzira ikozvino inosanganisira kubata URIs ine mavara akapunyuka.
Paunenge uchishandisa iyo hash rairo mune yepazasi-kumusoro yekumisikidza block kuronga mutoro kuenzanisa nekusunga kubva kune mutengi kuenda kuseva, kana kiyi isina chinhu, maitiro denderedzwa-robin ikozvino yaitwa.
Wakawedzera rutsigiro rwe ioctl (FIONREAD) mafoni, kana achiwanikwa, kudzivirira kuverenga kubva pakabatana zvine mutsindo kwenguva yakareba.
Chekupedzisira, zvinotaurwa kuti mune ramangwana, shanduko dzese kubazi rakagadzika 1.18 dzichabatana nebug uye kubvisirwa njodzi zvakakomba.
kunze kwaizvozvo nginx 1.19 bazi guru richaumbwa munguva pfupi, mukati mayo kuvandudzwa kwezvinhu zvitsva kuchaenderera. Kune vashandisi vakajairika vasina basa rekuona kuenderana nevechitatu-bato mamodule, zvinokurudzirwa kushandisa iro bazi hombe, pahwaro hwekuti ndeapi mavhezheni echigadzirwa chemabhizimusi Nginx Plus anoumbwa mwedzi mitatu yega yega.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve shanduko dzinoitwa mushanduro iyi nyowani, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Nginx 1.18.0 iri pano uye ndidzo shanduko dzayo dzinonyanya kukosha